Home - Cele Feed
ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ ဘုရားရိပ္တရားရိပ္မွာ ခိုလႈံရင္း တရားထိုင္ၿပီး ဘုရားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ကာ ကုသိုလ္ယူေနခဲ့တဲ့” စမိုင္းလ္”
ဇူလိုင် ၁၄ ရက် ယနေ့မှာတော့ အာဇာနည် ရဲ့ သမီးလေး မေဘုန်းဇာနည် လေးရဲ့ (၂)လပြည့်မွေနေ့ရက်မြတ် လေးပါ
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သမီးလေး ထရက်ရှာရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ မိဘမဲ့ ဂေဟာမှာ အလှူပြုပေးခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
တပ်မတော်အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာ ဝီးချဲများအပါအဝင် လိုအပ်သည့်အရာများ သိန်း ၇၀ဖိုး လှူဒါန်းမှုပြုခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
Myat - July 15, 2020
အခြေအနေရ မိသားစုလေးနဲ့ပဲ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးအလှူလေး ပြုလုပ်ခဲ့ရတာပါ ဆိုတဲ့ “အိမ့်ချစ်”
Myat - June 29, 2020 0
အဆိုတော် အိမ့်ချစ်ကတော့ ပရိသတ်အကြိုက် သီချင်းကောင်းလေးတွေ သီဆိုရင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်လာသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်က ပြီးခဲတဲ့ ဇွန်လ (၆) ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့ ချစ်သူ ကို Eric နဲ့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ အိမ့်ချစ်တစ်ယောက် မပြောမဆိုနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တာကြောင့် အံ့သြဝမ်းသာနေတာပဲ...
Myat - July 14, 2020 0
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အမိုက်စားသီချင်းစာသားလေးတွေနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်rapလေးတွေကိုပရိတ်သတ်ရင်ထဲရောက်အောင်သီဆိုတတ်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ဟာ အခုဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုလည်းတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး သူမချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းရယ် သမီးလေးထရက်ရှာရယ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Treasureလေးဟာလည်း အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကိုချစ်မွှေးပါလွန်းပြီး ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့အသည်းယားစရာကောင်းနေတာပါနော်။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ထရက်ရှာလေးဟာအခုဆိုရင် အသက်တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေး ထရက်ရှာလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်ဟာ မိဘမဲ့ ဂေဟာလေးမှာ အလှူပြုခဲ့တဲ့ ကြည်နူးဖွယ် ပုံရိပ်လေးတွေကို ယခုလို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ထရက်ရှာ့မွေးနေ့အမှတ်တစ်ရ...
ပရိတ်သတ်တွေ အရမ်းကို ချစ်နေရတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ ပုံလေးတွေ
ယနေ့ ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာတော့ ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းနှင့် ဆရာလေးကျောင်းတို့တွင် စုစုပေါင်းဆွမ်းဆန်အိတ် ၅၀လှူ ဒါန်းမှု ပြုပြန်တဲ့ “ခန့်စည်သူ”
သူမရဲ့ မြန်မာအကစွမ်းရည်ကို ပရိတ်သတ်ဆီ ချပြလိုက်တဲ့ ခေးဆက်သွင်
မေလ ၃၁ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတော် ဇော်ပိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ ☺🎈🎉
မိသားစုညစာ ထွက်စားရင်း ဖေဖေ့ကိုကပ်ချွဲနေတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ကာ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
ယနေ့ပဲ ဘဝတစ်ပါးကူးပြောင်းသွားရှာတဲ့ မိခင်ကြီးအတွက် ရည်စူး၍ ပရဟိတအသင်းမှာ ငွေကျပ် (၅)သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ တဲ့ “တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ”
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သမီးလေးတွေနဲ့အပြိုင် နုပျိုလှပနေတဲ့ “စမိုင်းလ် ” ရဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေးတွေ 😍
ယနေ့မှာ ပရဟိတ အသင်းတစ်ခုတွင် ငွေကျပ် (၁၀၀၀၀၀၀)လှူဒါန်းခဲ့တဲ့” မြင့်မြတ်”
မေလ ၁၄ရက်၊ယနေ့မှာပဲ နောက်ထပ် ရင်သွေးသမီးငယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင် လိုက်ရတဲ့ အဆိုတော် “အာဇာနည်”
အဒေါ်ဖြစ်သူ “အိန္ဒြာကျော်ဇင်” နဲ့ ရုပ်ခြင်းဆင်ပြီး တစ်နေ့တစ်ခြား ချစ်ဖို့ကောင်းလာတဲ့ “မေတိုးခိုင်” ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိက်လေးတွေ ☺😍
Female Celebrity Myat - June 3, 2020 0
မင်းသမီးချောလေး မေတိုးခိုင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိနေတဲ့ မေတိုးခိုင်ကတော့ အဒေါ်ဖြစ်သူ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ တူပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုတွေကို ရရှိနေတဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုပါ ရိုက်ကူးပြီး...
Celebrity News Kyaw Kyaw - April 26, 2020 0
ခေးဆက်သွင်ကတော့ အမြဲတမ်း တတ်ကြွပျော်ရွှင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲအများစုမှာလဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းသူတစ်ယောက်အဖြစ်လဲ ပရိတ်သတ်က လက်ခံထားပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို Facebookကနေတစ်ဆင့် အမြဲတမ်း ပရိတ်သတ်ကို အသိပေးနေကြပါ။ လက်ရှိချိန်မှာတော့ ခေးရဲ့ မြန်မာအကစွမ်းရည်ကို ပရိတ်သတ်တွေ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အချိုးအစား ကျနအောင် ကပြထားပုံက တကယ့် မင်းသမီးအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်...
ကင်ဆာကြောင့် ဆေးရုံတက်နေရလို့ သားငယ်လေး မွေးနေ့မှာအတူ မရှိပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မီးမီးခဲ
Female Singer Nan Ei - May 4, 2020 0
ကင်ဆာကြောင့် ဆေးရုံတက်နေရလို့ သားငယ်လေး မွေးနေ့မှာအတူ မရှိပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မီးမီးခဲ " Happy Birthday Son "Napolion"သားလေး3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ သားနဲ့အတူမရှိပေးနိုင်တာကို ဝမ်းနည်းပေမယ့် သားအတွက် ခွန်းအား အသစ်တွေမွေးပြီ ဆေးရုံကနေ အကောင်းဆုံးကုသမှုတွေ ခံယူပြီး ပြန်လာခဲ့မှာမို့ သားလေး ပျော်ရွှင်ရစေမယ်နော်။...
အခြေအမြစ်မရှိ စေတနာစော်ကားသူကြောင့် အတော်လေးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သုဝေ
Celebrity News Kyaw Kyaw - April 24, 2020 0
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ယနေ့မနက်တက်လာတဲ့ သတင်းတွေကတော့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံကို V ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိန်း ၈၀၀ လောက် မြတ်သွားတယ်လို့ အသံဖိုင်တစ်ခု ပျံ့နှံ့လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ချစ်သုဝေကတော့ များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ သူမဟာ ပရဟိတ အလုပ်တွေ အလှူအတန်းတွေမှာ လွန်စွာ သဒ္ဒါတရားကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။...
ချစ်ညီမလေးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်ကို စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ စောလားထော်ဝါး
Male Singer Kyaw Kyaw - April 23, 2020 0
Myanmar Idol Season-1 ရဲ့ Winner ဆုရှင် စောလားထထော်ဝါးကတော့ လက်ရှိတိုင် အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေဆဲပါ။ တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ဖြသ်သလို ပွင့်လင်းဖော်ရွေတဲ့ ပုံစံလေးတွေကြောင့်လဲ ပရိတ်သတ်အားပေးမှု ရရှိထားသူပါ။ လားလားကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း ချ်စညီမလေးကို ဆေးကုပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့...
လိမ္မော်သီးနဲ့ အရမ်းတွေ Ro ထားတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ Sunshineသီချင်း mtv💛💛🍊🍊
Female Celebrity Nan Ei - June 1, 2020 0
လိမ္မော်သီးနဲ့ အရမ်းတွေ Ro ထားတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ Sunshineသီချင်း mtv💛💛🍊🍊 Cele Feed ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုတော့ အားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲ ဖြစ်မှာပါနော်.... ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ ချောမောလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရုံသာမက ချိုသာပြီးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသံလေးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်....... သူမကတော့ အခုနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်ကူးဖြစ်တော့ဘဲ တေးသီချင်းတွေကိုသာအဓိကလုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်.....ဝိုင်းစုရဲ့...
ငယ်ဘဝက အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့ အမှတ်ရပုံရိပ် တချို့ကို ချပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် “ရဝေအောင်”
Celebrity News Myat - May 18, 2020 0
သရုပ်ဆောင် ရဝေအောင်တော့က တစ်ခေတ်တခါက ပြက္ခဒိန်ပိုစတာ၊ တီဗီကြော်ငြာ၊ သီချင်းဗီစီဒီ နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တွေမှာ နေရာယူနိုင်ခဲ့ပြီး လူငယ် ပရိသတ် တွေကြား ရေးပန်းစားခဲ့တဲ့ မင်းသားချောတစ်လတ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရဝေအောင်ဟာ လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အတော်လေး အလှမ်းဝေးသွားခဲ့ပေမဲ့ သူ့ကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ် တွေကတော့...
မဝတ်ဖြစ်တဲ့ အင်္ကျီတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပေးမယ် တခြားလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလည်း လှူမယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး video
Female Celebrity Nan Ei - May 17, 2020 0
မဝတ်ဖြစ်တဲ့ အင်္ကျီတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပေးမယ် တခြားလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလည်း လှူမယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး Beauty Blogger တစ်ဦးလည်းဖြစ် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးကိုတော့ အားလုံးသိထားပြီးသားပါနော်.... ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ အရမ်းကိုတော်လွန်းတဲ့ နေခြည်ဦးကိုတော့ ပရိသတ်တွေက အားကျချစ်ခင်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်...... နေခြည်ဦးကတော့ သူမ ဇာတ်ကားရိုက်ခဲ့တုန်းက အဝတ်အစားတွေ၊ ပွဲတက်ခဲ့တုန်းက အဝတ်အစားတွေကို မိခင်ကနေတဆင့် လှူဒါန်းမယ်လို့ မနေ့က သူမရဲ့...
မေလ ၅ရက်နေ့မှာ သိန်း၂၂၀တန် အသက်ရှူစက် တစ်လုံး လှူဒါန်းမှုပြုပြန်တဲ့ “စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်”
Myat - May 5, 2020 0
ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူ မီးမီးခဲ အား သံယောဇဉ်လက်ကျန်ကြောင့် ကျန်းမာစေချင်ကြောင်း ဆုတောင်းလာတဲ့ “ထူးအယ်လင်း”
Myat - May 14, 2020 0
Nan Ei - May 17, 2020 0
ယနေ့မှာ အသက် ၁၄နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Drummer “ဘုံဘုံ”
Myat - June 15, 2020 0
ညအမှောင်ထဲမှာတောင် ပပဝတီလေးကိုဖြစင်တောက်ပနေတဲ့ အသားရည်လေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ “ရွှေကစ်” “ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ” ရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေ 😍👇👇
Myat - June 3, 2020 0
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲကံဆိုးတယ်ထင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာ နွမ်းပါးသူတွေကို အလှူသွားပြုရင်း အသိတရားတခု ရခဲ့တဲ့ အကြောင်း ပြောလာတဲ့ “အိုင်းရင့်ဇင်မာမြင့်”
ရည်းစားနဲ့ ချိန်းတွေ့တာ အကိုနဲ့ ထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ ခေးဆက်သွင်
Kyaw Kyaw - April 21, 2020 0
ကျစ်လစ်သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ်လွင်နေတဲ့ အလှဓာတ်ပုံလေးမျှဝေလာတဲ့ နော်ဖောအယ်ထား💙💙💙
ဒီကာလမှာ ငွေအကြပ်တည်းဖြစ်သော်လည်း ရှိတဲ့လက်ကျန်ထဲက ဆိုက်ကားသမား ဦးလေးထံ ခွဲဝေလှူဒါန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ “ယုန်လေး”
သန့်ရှင်းရေးတွေလုပ် တစ်ခြံလုံးပိုးသတ်ဆေးတွေဖျန်း တရားတွေပိုနာ ပိုထိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
ကျစ်လစ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့အမိုက်စားပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ အိချောပို😍😍
Myat - July 15, 2020 0
Myat - July 13, 2020 0
Myat - July 9, 2020 0
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေး ရွှေပိုင် နဲ့အတူ မိသားစုလိုက် တစ်ပျော်တစ်ပါးကြီးခရီးထွက်ရင်း ကြည်နူးနေတဲ့ ဇော်ပိုင် ဇနီးမောင်နံှ
မဟာမြိုင်တောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ကြာသင်္ကန်းကပ်လှူခွင့်ရခဲ့တဲ့ “ရတနာဗိုလ်”
လက်ဆယ်ဖြာထိပ်မှာမိုးပြီး ရှိခိုးကန်တော့နေတဲ့ သမီးလေးကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိတွေဖြစ်နေတဲ့ ” ဖြူဖြူထွေးရဲ့မိဘနှစ်ပါး”
ပရိသတ် တွေ ပြုံးပျော်စေဖို့ ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဇနီးဖြစ်သူ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပေးနေရကြောင်းကို...
Celebrity News Myat - July 15, 2020 0
မင္​းသမီး​ေခ်ာ စမိုင္​းလ္​ က​ေတာ့ အႏုပညာအလုပ္​​ေတြမလုပ္​ျဖစ္​​ေတာ့​ေပမယ္​့ ပရိသတ္​ ​ေတြရဲ႕ ခ်စ္​ခင္​ မႈကို ယ​ေန႔တိုင္​ ရရိွပိုင္​ထားပါတယ္​။ ​ အလႉအတန္းေတြမွာလည္း လက္မေႏွးဘဲ လႉတန္းတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အခ်စ္​ပိုရသူလည္​းျဖစ္​ပါတယ္​။ စမိုင္​းဟာ လက္​ရိွမွာ ခင္​ပြန္​းျဖစ္​သူႏွင္​့ သာသနာေဘာင္သို႔ အတူတကြဝင္ေရာက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြကို အတူျပဳလုပ္ေနသလို ဘုရားစာေတြ တရားစာေတြကိုလည္း...
Male Singer Myat - July 14, 2020 0
အသံံပါဝါ ကောင်းကောင်းနဲ့ လူငယ် ပရိသတ် တွေကြား ယနေ့တိုင် မရိုးနိုင်တဲ့ သီချင်းကောင်းတွေနဲ့ ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် အာဇာနည်ကတော့ ယခုဆိုရင် ဇနီးချော ဝမ်းနဲ့အတူ အေးချမ်းသာတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သားလေး ချစ်ချစ်တုန် နဲ့ ဖစ်ဖစ်တုန် အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၄ရက်နေ့မှာ...
Female Singer Myat - July 14, 2020 0
Celebrity News Myat - July 13, 2020 0
အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ၊ အဘိဓမ္မဓရ အကယ်ဒမီ ခန့်စည်သူဆိုတဲ့ ဘွဲ့ကို လည်း ရရှိထား သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်း ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်သလို သွားရောက်ရိုက်ကူးတဲ့ နယ်မြို့တွေမှာလည်း အမြဲတမ်း အလှူအတန်းတွေ လုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ခန့်စည်သူဟာ ပရဟိတအလုပ်တွေမှာသာမက၊ ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက် စတဲ့...
Celebrity News Myat - July 9, 2020 0
အသားအရည် ညိုညိုညက်ညက်လေးနဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေးမေကဗျာ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိကာ ယနေ့ထိတိုင် အောင်မြင်ကျော်ကြားနေဆဲ မင်းသမီး တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေကဗျာဟာ သမီးလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားထားတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် နုပျိုနေတဲ့အလှအပတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ အိမ်မှာပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနားနေပြီး သမီးလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ေ လးတွေ...
Male Singer Myat - July 9, 2020 0
လူငယ် ၊လူလက် ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ဇော်ပိုင်ကတော့ ယနေ့ထိလည်း သူဝါသနာပါတဲ့ ဂီတအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်း ပရိတ်အခိုင်အမာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ဆဲပါပဲနော်။ ဇော်ပိုင်မှာတော့ အရမ်းကိုချောမောလှပတဲ့ ဇနီးချောလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားချောလေးတစ်ယောက်ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင် သိတတ်ပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ ဇော်ပိုင့်ရဲ့သားလေး...
အသက်တွေကြီးလာပေမယ့် အချစ်တွေကမပျက်စီးသေးဘဲ ကြည်ကြည်နူးနူး Ro နေကြတဲ့ စိုးသူနဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ
လက်ရှိမှာ အသက် ၄၉နှစ် ပြည့်ပြီးသော်လည်း ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ချစ်သမီးလေး ထိပ်ထိပ် နဲ့ အပြိုင် နုပျို လှပနေတဲ့...
Cele Feed is celebrity news, singer news, movies, entertainment, lifestyle, music, fashion, and gossip website. We provide you with the latest celebrity news and videos straight from the entertainment industry.
Contact us: info@celfeed.com
© Created by Web Feed Myanmar Co., Ltd.